အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ၏သုံးသပ်ချက်များ - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ၏ reviews
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များစဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny စာအုပ်
အကြှနျုပျ၏သာသတင်းစကားကို "သင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " ဒီစာအုပ်, ငါ့လမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်ငါ့နှလုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ငါ၏အ core ကိုမှငါ့ကိုမကြုံရတဲ့ထားပြီးတစ်ဦးကျော်ကြားတဲ့ပါ! ပစ္စည်း၏, ငါပစ္စည်းတချို့၏ရှုပ်ထွေးငါ့ကိုစိန်ခေါ်ကြောင်းဝန်ခံနဲ့ကျွန်မအပြည့်အဝတချို့နားလည်နိုင်ဖို့သေးရှိသည်, လျှင်မအရှိဆုံး။ ဒါပေမယ့်ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့အကြှနျုပျ၏အကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ! တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူကျွန်မအနည်းငယ်ပိုပြီးနားလည်မှုရဖို့ဖတ်ပါ။ ငါသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် Harold, ငါ၏နှလုံး၌မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငါကလိုအပ်သူကိုကိုသူတို့အားတာဝန်ခံ၏ပစ္စည်းကိုအခမဲ့အောင်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအတောမသတ်ကျေးဇူးတင်တယ်!
Percival ရဲ့ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ဘဝအကြောင်းကိုတိကျမှန်ကန်တိကျမ်းစာ၌လာသည်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မဆိုလေးနက်သောရှာဖွေသူရဲ့ရှာဖွေရေးကိုအဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။ စာရေးသူကသူပြောတတ်သောသူသိတယ်ကြောင်းပြသသည်။ fuzzy ဘာသာရေးဘာသာစကားနှင့်မျှမထင်မြင်ချက်မျှရှိပါသည်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာရှင်းရှင်းထူးခြားတဲ့, Percival သူသိတယ်အဘယျသို့စာဖြင့်ရေးသားထားပြီး, သူသည်ကြီးစွာသောသဘောတူညီမှုသိတယ် - အခြားမည်သည့်လူသိများစာရေးသူထက်ဆက်ဆက်ပို။ သင်၌နေသောသူအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပါလျှင်သင်ဒီမှာဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်, စကြဝဠာသို့မဟုတ်အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏သဘောသဘာဝထို့နောက် Percival သငျသညျကိုဆင်းမသွားပါစေလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့မူရင်းအပြစ်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, လူသား၏ကျဆုံးခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်အကြောင်းအရာများရှင်းလင်းသူ၏မြောက်မြားစွာရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤမေးခွန်းများကိုအားမိမိအဖြေကို, Lucid သော authoritative နှင့်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစဉ်းစားလူတစ်ဦးအဘို့ရှေ့ဆက်လမ်းကိုလွင်ပြင်ကိုဖန်ဆင်းနှင့် The ဂရိတ် Way ကိုသူ၏ Exposition အစဉ်အဆက်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Percival မဆိုရိုးရိုးသားသားလူတစ်ဦးနားလညျပွီးလုပျနိုငျသောအခြေခံမူအားမိမိအိုတိုမီလျော့ကျစေပါတယ်အားလုံးမှုကြီးနဲ့တူရှင်းလင်းစွာအသေးစိတ်ကိုနှင့်တင်ပြအတူသိပ်သည်း။ သေချာဘို့အရာတစ်ခုမှာ: အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ဖတ်ရှုပြီးနောက်သင်ရွေ့လျားမှုသို့သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနာဂတ်ဆီသို့သင်ကျု့ံလတံ့သောအတှေးအခန့်ထားပြီပါလိမ့်မယ်။ ကိုပြင်ဆင်ခံရ!
မုချ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များအတွက်သီးခြားစွာသိသာထင်ရှားသောဗျာဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၏အနံနှင့်အတိမ်အနက်ကို စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ကျယ်ပြန့်သည်၊ သို့သော်၎င်း၏ဘာသာစကားသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ အဆိုပါစာအုပ်သည်လုံးဝမူရင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Percival ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်မှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတွေးမိသည်၊ မှန်းဆ။ မရပါ။ သူကအဘယ်သူမျှမကွင်းသဘောထားမှတ်ချက်စေသည်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကားလုံးမရှိ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကားလုံးမရှိပါ။ တစ်ခုမှာအနောက်ဉာဏ်ပညာသင်ကြားမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားအခြေခံမူများနှင့်သဘောတရားများနှင့်ဆင်တူချက်များနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အသစ်တစ်ခုသည်အသစ်ဖြစ်သည့်ဝတ္ထုကိုပင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။ သို့သော် Percival သည်စာဖတ်သူ၏ခေါင်းစဉ်များနှင့်စာဖတ်သူနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူသည်မိမိ၏တင်ဆက်မှု၏ယုတ္တိဗေဒသည်သူ၏ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှု၏အချိန်နှင့်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်း၊ Percival ကိုဖတ်သည့်အခါ“ Word to the Wise” တွင် Heindel ၏အသနားခံချက်သည်ညီမျှစွာသင့်လျော်ပေလိမ့်မည် -“ စာဖတ်သူသည်အလုပ်ကိုလေ့လာခြင်းကသူ၏ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကျေနပ်သည်အထိသူသည်ချီးမွမ်းခြင်း၊
၎င်းသည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်၏လူသိများပြီးမသိသောသမိုင်းတွင်ရေးသားခဲ့သောအရေးအကြီးဆုံးစာအုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖော်ပြထားသောအတွေးအခေါ်များနှင့်ဗဟုသုတများသည်ဆင်ခြင်တုံတရားကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးအမှန်တရား၏“ သံကြိုး” ရှိသည်။ HW Percival သည်လူသားများအတွက်မသိရသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူ၏စာပေလက်ဆောင်များသည်ဘက်မလိုက်ဘဲစုံစမ်းသည့်အခါဖော်ပြလိမ့်မည်။ ငါဖတ်ခဲ့သည့်လေးနက်ပြီးအရေးကြီးသောစာအုပ်များစွာ၏အဆုံးမှာသူ၏“ ကျွမ်းကျင်စွာဖတ်ရှုရန်အကြံပြုထားသည့်” စာအုပ်များတွင်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်မိသည်။ သူသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သောကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်သည်။ လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာမှာ Harold Waldwin Percival လို့လူသိများတဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုစဉ်းစားတိုင်းပျော်ရွှင်ဖွယ်အပြုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခံစားချက်တွေကိုအတွင်းမှာထုတ်ဖော်ပြသထားတယ်။
ကျွန်မလက်ခံရရှိသည်အထိငါတကယ်နားလည်ဘယ်တော့မှ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destinyဘယ်လိုကျနော်တို့စာသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ထွင်း။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny OK ကိုငွေပြန်မဝယ်နိုင်လာ၏။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောငါ့အသက်ကိုကြောင့်ရှာနေခဲ့ကြရတယ်။
ငါ၏လေ့လာမှုစတင်တိုင်အောင်မဟုတ်ခဲ့ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ငါဘဝမှာထွန်းသစ်စစစ်မှန်တဲ့တိုးတက်မှုမှတ်ချက်ချသည်။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny HW Percival သည်ရေးသားဖူးသမျှတွင်ထူးခြားသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမေးခွန်းဟောင်း Quo Vadis နှင့်ဆက်ဆံ? ဘယ်ကလာတာလဲ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေကြသနည်း ဘယ်သွားနေကြတာလဲ? သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ် ဦး ချင်းဘ ၀ များတွင်လုပ်ရပ်များ၊ အရာများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကံကြမ္မာမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုသူရှင်းပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်ဤအတွေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများအပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Percival ကကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနှင့်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏အတွေးအခေါ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအတွေးအခေါ်ကိုစတင်ခြင်းသည်သူ၏လက်ရာ၌ဖော်ပြထားသည်။ Percival ကိုယ်တိုင်သူသည်သူသည်တရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်၊ ဆရာတစ် ဦး လည်းမဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ အစီအစဉ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်၏စကြဝUnာ။ ဤစာအုပ်ထဲတွင်ရနိုင်သောရှင်းလင်းပြတ်သား။ တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တက္ကဗေဒစာအုပ်မှတင်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ အမှန်စင်စစ်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု!
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ငါ့ထံသို့ရိုးရှင်းစွာအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုကောင်းသော၏လောကဓာတ်ပြုတော်မူပြီကြောင့်ဧကန်အမှန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တှငျနထေိုငျဒီအသက်အရွယ်အဘို့အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်ဉာဏျပညာ-လေးနက်တဲ့နားလည်မှု-နှင့် Lucid နှင့်အကဲဆတ်သောသတင်းအချက်အလက်များတွင်ပါရှိသောထင် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny HW Percival တို့ကဈေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဝေးအသုံးပြုပုံ Percival နှင့်နှိုင်းယှဉ်, မရေ unconvincing နှင့်ရှုပ်ထွေးပုံပေါက်သူကိုကမ္ဘာ့ဘာသာတရားအပေါ်ကြီးစွာသောစာရေးဆရာများထိပ်ဆုံးမှ။ အကြှနျုပျ၏ခန့်မှန်းချက် 50 နှစ်ပေါင်းသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်။ ပလေတို (အနောက်တိုင်းဒဿန၏ဖခင်) နှင့်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ (ဆန့်ကျင်ဘက်) မှသာလျှင်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြည့်စုံထုံးစံ၌ unifies သူကို Percival မှအနီးရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုလာကြဘူး!
Percival အမှန်ပင် 'ကုလားကာထိုးဖောက်' 'နှင့်သူ့စာအုပ်သည်ငါ့ဆီသို့ဝဠာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ ငါသည်ဤစာအုပ်ပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်သောအခါငါကျဉ်းမြောင်းဂျာကင်အင်္ကျီဒါမှမဟုတ် boneyard အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny အဆုံးမရှိတဲ့ဘာသာရပ်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောကျမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်နှငျ့ ပတျသကျ. တစ်ခုစွယ်စုံကျမ်း၏တစ်ခုခုပါပဲ။ ငါသည်ငါ့ပို့ချချက်များနှင့်ငါ၏အမှု၌ရည်ညွှန်းဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုသေချာဖြစ်၏။
ငါနှစ်ပေါင်းအများကြီးစည်းကမ်းများကိုလေ့လာနေခဲ့ကြနှင့်ဤသူသည်ခဲ့ရပြီးအတူတူကအားလုံးကိုရောနှောနေခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောအသက်တာကိုအဘယျ၏ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်သောငါတို့သည် / မဟုတ်ကြသည်ကိုထုတ်ဝတ်ဖို့ဘယ်လိုသိသည်။
Theosophy နှင့်အတွေး၏စနစ်များစာသားများစွာ၌ငါ့ကျယ်ပြန့်ဖတ်နေသော်လည်းငါနေဆဲဟုခံစားရ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ယင်း၏မျိုး၏အများစုထူးခြားတဲ့စုံဆုံးနှင့်အများဆုံးထူးထူးခြားခြားသိနားလည်နိုင်စွမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသည်အခြားစာအုပ်များ divested အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်လျှင်ဒါဟာငါနှင့်အတူစောင့်ရှောက်မယ်လို့တတစ်ခုတည်းအသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါဖတ်ပြီးပြီ စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny နှစ်ကြိမ်ယခုနှင့်ခဲထိုကဲ့သို့သောအကြီးစာအုပ်တကယ်တည်ရှိကြောင်းယုံကြည်နိုင်ပါ။
အတိတ်ကာလအတော်ကြာဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းကျွန်မကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ယောက်ျား၏သဘောသဘာဝအဖြစ်အကျယ်ပြန့်နိုင်သမျှအသိနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးသောကျောင်းများလေ့လာနေမြေအတော်လေးနည်းနည်းဖုံးလွှမ်းပါပြီ။ အလွန်ငါလေ့လာကျောင်းများနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်၏အလွန်နည်းပါးသည်လူနှင့်သူ၏ကြမ္မာ၏စစ်မှန်သောသဘာရည်မှတ်ပူဇော်ဖို့တန်ဖိုးဘာမှရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသို့ငြာပြီးတော့တဦးတည်းဒဏ်ငွေနေ့က စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny.
အလုပ်အကိုင်ကစိတ်ပညာအရိုးအကြောအဆစ်နှင့်အမျှကျွန်မအများကြီးရှုပ်ထွေး၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာနှင့်နားလည်မှုကိုရှေ့ဆက်ဖို့မစ္စတာ Percival ၏အကျင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ်,
ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးနေ့တိုင်းသူ့စာအုပ်တွေကို၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖတ်, ကြှနျုပျတို့အတွင်းသို့မဟုတ်မပါဘဲ, သမ္မာတရားသည်မိမိအမြင်ချင်းမှတဆင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, ဘာပဲပေါ်သွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သူကငါနေ့တိုင်းငါ့ကိုလှည့်ပတ်သွားစောငျ့ရှောကျသောပေုံမရှိသောအတွက်အလို့ငှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတုန်လှုပ်ရိုးအမြစ်ကိုထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးတည်ငြိမ်ခြင်းသို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ငါယုံကြည်တယ် စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ဖြစ်နိုင်အစဉ်အဆက်ရေးထားလျက်ရှိ၏အရှိဆုံးစိတ်ကူးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် "လူကိုယ်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ " "နားလည်မှုရရှိသမျှသည်သင့်လာပြီအတူ" အဲဒီနှစ်ခုကိုးကားအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားရှိသည်ဟုငါပိုကောင်းဒီအဆုံး၏ရယူစတင် Harold ဒဗလျူ Percival ၏အကျင့်မှတဆင့်ထက်မကအခြားသိ